Bit By Bit - The n'ọdịnihu - 7.2.2 soò na-eche nanị data collection
Data collection na-eru nso nke gara aga, nke bụ na-eme nchọpụta na-eche nanị, na-agaghị na-arụ ọrụ ka mma na dijitalụ afọ. N'ọdịnihu, anyị ga-ihe a soò na-eche nanị obibia.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta data na afọ dijitalụ, ị ga-achọpụta na ị na-asọ asọ maka oge na nlekọta mmadụ. Oge na nlebara anya nke ndị gụrụ gị bara uru nye gị; ọ bụ ihe onwunwe nke nyocha gị. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-ahụ maka ọdịmma mmadụ na-emepụta nchọpụta nke ndị bi na ya dịka ndị agha, dị ka undergraduates na campus labs. Na ntọala ndị a, mkpa nke onye na-eme nchọpụta na-achị, na ọṅụ nke ndị so na ya abụghị ihe kachasị mkpa. Na nyocha nke dijitalia, uzo a abughi ugwo. Ndị na-eso ya na-anọkarị n'ebe dị anya site na ndị nchọpụta, na kọmpụta na-agbakarị mmekọrịta n'etiti ha abụọ. Ntọala a pụtara na ndị na-eme nchọpụta na-asọmpi maka nlebara anya nke ndị na-ege ntị ma ya mere ọ ghaghị ịmepụta ahụmịhe na-enwe obi ụtọ. Ọ bụ ya mere na isi nke ọ bụla metụtara mmekọrịta na ndị so na ya, anyị hụrụ ihe atụ nke ọmụmụ ndị weere òkè na-etinye aka na nchịkọta data.
Dịka ọmụmaatụ, na isi nke atọ, anyị hụrụ otú Sharad Goel, Winter Mason, na Duncan Watts (2010) mepụta egwuregwu a kpọrọ Amon nke bụ n'ezie oghere nkọ na gburugburu nnyocha nyocha. N'isi isi nke 4, anyị hụrụ otú ị nwere ike isi mepụta data efu ọnụahịa site na ịmepụta ihe ndị mmadụ chọrọ n'ezie ịbanye, dịka egwu na-ebudata nyocha nke mụ na Peter Dodds na Duncan Watts kere (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . N'ikpeazụ, na isi nke 5, anyị hụrụ otú Kevin Schawinski, Chris Lintott, na òtù Galaxy Zoo si kee otu mmekorita nke kpaliri ihe karịrị 100,000 mmadụ itinye aka na mbara igwe (na mmetụta abụọ nke okwu ahụ) oyiyi labeling ọrụ (Lintott et al. 2011) . Na nke ọ bụla n'ime ndị a, ndị na-eme nchọpụta lekwasịrị anya n'ịmepụta ezigbo ahụmịhe maka ndị na-amụ ihe, na nke ọ bụla, ebe a na-etinyere na-enyere ndị ọhụrụ aka nyocha.
M na-atụ anya na n'ọdịnihu, ndị na-eme nchọpụta ga-anọgide na-azụlite ụzọ maka nchịkọta data nke na-agbalị ịmepụta ezigbo ahụmịhe ọrụ. Cheta na n'ime oge dijitalụ, ndị na-eso gị bụ otu igodo na vidiyo nke nkịta skateboarding.